Gbasara Anyị - Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd.
Hebei Pukang Medical Instruments Co., Ltd. Amalitere ya na 1996, dịka obere ụlọ ọrụ nke nwere isi obodo RMB 500,000 edebanyere aha, mpaghara ala nke 16.3 mu na naanị ndị ọrụ ole na ole na mmalite ya. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na n'ichepụta akwa ndị nọọsụ na ahụike, arịa ụlọ ọgwụ, ngwa ọrụ ọkụ na-acha ọbara ọbara na ngwaahịa ndị ọzọ, nke nwere isi obodo RMB 120 nde, ala mpaghara nke 180 mu, mpaghara ihe owuwu 92,000 square, ihe karịrị ndị ọrụ 580 na mmeputa kwa afọ nke 200,000 nkeji (ibe).
Companylọ ọrụ ahụ agafee asambodo sistemụ ISO 9001, asambodo sistemụ ISO 13485, asambodo EU CE, asambodo US FDA, asambodo njikwa gburugburu ebe obibi ISO 14001, OHSAS 18001 asambodo na-ahụ maka njikwa ike na nchekwa nchekwa, na-eje ozi dị ka onye na-eweta ngwaahịa ọgwụ ike United Nations. na onye China weputara onye na-ebubata ya maka ịbelata ịda ogbenye na akụrụngwa ọgwụ ahụike. Akara akara ya “Little Nọọsụ” ka “Hebei Famous Trademark” ma gosipụtara ngwaahịa a ka ọ bụrụ “Hebei Famous Brand Product”, wee merie ihe karịrị nsọpụrụ iri atọ nke mba, mpaghara, obodo na ngalaba ndị ọzọ nyere.
Currentlylọ ọrụ ahụ nwere akụrụngwa mmepụta aka dị elu dị ugbu a, dịka igwe laser na-esite na Germany, ihe na-agwụ ike na ebe a na-egwe ọka (USA), robot na-esite na Japan, igwe ịkpụ laser, igwe mgbakọ eserese (njikọta njikọ Sino-US) na yabụ pụta.
Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ aka ọrụ igwe, elektrọnik, ihe ngosi, wdg, R&D nọọrọ onwe ya nke ngwaahịa nlekọta ahụike yana ikike zuru oke iji kwado ụlọ ọgwụ na ọkwa niile. Companylọ ọrụ ahụ enwetala ihe karịrị narị patent 100, rụọ ọrụ na-eduga na otu ụlọ ọrụ ahụ na mba niile, enwetara aha nke ngalaba “Teknụzụ Center”, mpaghara “High-tech Enterprise”, “Sayensị na Nkà na ụzụ. nkwukọrịta nka na ụzụ, mmekọrịta ndị ọrụ na ndị ọzọ na Mahadum Tianjin, yana Mahadum Beijing na Mahadum Azụmaahịa. Na 2017, ụlọ ọrụ ahụ binyere aka na nkwekọrịta mmekọrịta dị n'etiti ya na Beijing Aerospace Long March Launch Vehicle Technology Co., Ltd, na-akara akara ngosipụta na ọmarịcha iji jikọrọ aka mepụta mmepeanya ahụike nke teknụzụ ikuku.
Ebe ọ bụ na nke mbụ “NọọsụAmalitere ụlọ ebe a na-elekọta ndị agadi na 1997, ụlọ ọrụ ahụ emeela atụmatụ nkwalite ngwaahịa nke ọgbọ asaa, nweta ọtụtụ onyinye, ebe ọnụnọ azụmahịa karịrị mba 100 na mpaghara na Europe, Eshia, Africa na America, wee guzobe mmekọrịta azụmahịa ogologo oge na ọtụtụ narị ụlọ akwụkwọ ọta akara nke klas-III nke obodo niile. Ka ọ dị ugbu a, maka ebumnuche nke ndị ahịa na-eje ozi ka mma, ụlọ ọrụ ahụ ewepụtala ọfịs na ụlọ ahịa azụmaahịa karịa na mpaghara 20 nke China.
Companylọ ọrụ ahụ ga-agbaso ị productsụ ọgwụ ọgwụ ike dị ka ọrụ ya, ichekwa ahụike dịka ọrụ ya, yana iwulite ụlọ ọrụ afọ ole ka ebumnuche ya, iwelie ụlọ ọrụ ike ma nyere ike anyị maka mmepe nke ụlọ ọrụ ahụike na-adabere na usoro sayensị na nke njikwa ọrụ dị mma. .